एनसेलको ‘कल आयो पैसा पायो’ अफर, कसरी सुचारू गर्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
एनसेलको ‘कल आयो पैसा पायो’ अफर, कसरी सुचारू गर्ने ?
२०७६, ३० फाल्गुन शुक्रबार
काठमाडौंः एनसेल प्रालिले ‘कस्टमर लोयल्टी’ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘कल आयो पैसा पायो’ अफर यो वर्ष पनि अझ बढी बोनसका साथ ल्याएको छ ।
यसरी प्राप्त बोनस तीन दिनको लागि मान्य हुनेछ । ग्राहकले प्राप्त गरेको बोनस एनसेलको नेटवर्कभित्र कुरा गर्न, एसएमएस पठाउन र इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् ।
एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले १७१२६ मा डायल गरी यो योजना निःशुल्क सुचारु गरी लाभ लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी ग्राहकले अङ्ग्रेजीमा ‘ए’ टाइप गरी १७१२६ मा एसएमएस पठाएर पनि यो बोनस योजनामा सामेल हुन सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस एनसेलले ल्यायो ‘भ्यालेन्टाइन अफर’, कसरी सुचारू गर्ने ?
बोनसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा कुरा गरी यस योजनाको मापदण्ड पूरा गरेका ग्राहकले प्रत्येक हप्ता सामसुङ्ग ग्यालेक्सी एट्वान्टी स्मार्टफोन पनि जित्न सक्नेछन् । यो योजना अवधिभर प्रत्येक हप्ता १० जना ग्राहकले १÷१ थान स्मार्टफोन पाउनेछन् ।
एक हप्ताको समयावधिमा ग्राहकले पाएको बोनस, कुल अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल र औसत कलको समय अनुसार विजेताको छनोट गरिनेछ ।
याे पनि पढ्नुस देउवा भन्छन्, ‘एनसेलको मैले नाम पनि सुनेको छैन्, वाइडबडीका विषयमा कुरा उठाउने म नै हुँ’
ट्याग्स: एनसेल, कल आयो पैसा पायो